Apple inonyora mitsva yePad Pro mhando muChina | IPhone nhau
Iko mukana wekuve ne Keynote pakupera kwemwedzi inenge yakakwira kwazvo. Runyerekupe nemishumo zvinoratidza kuti Apple inogona kunge iri kugadzirira mharidzo yakatsaurirwa kune iyo iPad uye Mac renji, zvishandiso zvavakaisa parutivi musi wa Gunyana 12 pavakavandudza iyo yose iPhone renji. Nekudaro, isu hatisati tine chisimbiso chepamutemo kana runyerekupe nezve inogona kuitika zuva.
Zvichakadaro, Apple yakanyoresa mu Ministry of Indasitiri uye Ruzivo Technology yeChina matatu matsva maPad mhando, ayo atinofungidzira kuti anobva kuPro renji, uye chigadzirwa chakakamurwa ne "Kubatanidza kweBluetooth" iyo yatisingazive chero chinhu nezvayo, asi ingangoita Apple Penzura 2.
Apple inogadzirira kusvika kweiyo nyowani iPad Pro
Muna Chikunguru wegore rino, Apple yakatonyoreswa munzvimbo dzakasiyana dzepasi mhando nyowani dzezvigadzirwa zvako, iyo yavakaita chokwadi chekuva pasi pegadziriro yepamutemo. Iyo itsva iPad Pro yakanyoreswa muEastern Europe nyika yaive iyo A1934, A1979, A2013, A2014 uye A1985. Kunyange zvakadaro, mhando nyowani dzakanyoreswa muChina Iwo ari emhando dzePad iPad A1876, A1980 uye A1993, zvinoenderana nekunyoreswa kwemamwe mamodheru neEurasian Economic Commission.
Nekudaro, iyo A1993 modhi zvitsva, uye inotarisirwa kuve nyowani nyowani isina kutengeswa kare. Uye zvakare, a "Chigadzirwa cheBluetooth" nenhamba A2051. Kunyangwe pasina humbowo, zvinotarisirwa kuti chishandiso ichi idzva vhezheni yeApple Penzura, ine kubatana kunovandudzika uye kuenderana neazvino maAirPods anobatana nechigadzirwa pasina kubatika nguva dzese dzatinoda kudzishandisa.
Rangarira zvinotarisirwa pa itsva iPad Pro: hombe sikirini nekuda kwekudzikiswa kwemafuremu, kubviswa kweye Kumba bhatani uye kuunzwa kweFace ID yekuvhura system, kugadzirisa mune maprosesa uye makamera uye, pakupedzisira, kubviswa kweMheni yekuchaja chiteshi kuitsiva nerudzi rwe USB C.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inonyora mhando nyowani yePad Pro muChina